Global Voices teny Malagasy · 26 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 26 Oktobra 2018
Korea Avaratra sy ny Fanaovana Mobcast???
Hevitra26 Oktobra 2018
(Fanamarihana: lahatsoratra Anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2005 ity lahatsoratra ity) Nipoitra ny lahatsary iray (rohy maty) mampiseho ny hetsipanoherana voalohany indrindra voarakitra tao Korea Avaratra. Nitoko isa vaovao maro enti-manohitra ny herisetra tohanan'ny fanjakàna. Angamba afaka manomboka mamoaka mobcast ry zareo ao Korea Avaratra amin'izao izy mahazo finday Sinoa marobe izao. Resaka matotra....
Amerika Latina26 Oktobra 2018